Fifosana sy fanalam-baraka amin’ny facebook : nidoboka am-ponja ilay mpanakanto mpandrindra ny kaonty | NewsMada
Fifosana sy fanalam-baraka amin’ny facebook : nidoboka am-ponja ilay mpanakanto mpandrindra ny kaonty
Nidoboka am-ponja vonjimaika eny amin’ny fonjan’Antanimora ilay mpanakanto fantatry ny maro amin’ny anarana hoe H.R izay mpandrindra ny kaonty ao amin’ny hoe “Fifosana” olona. Heloka anenjehana azy ny fanalam-baraka olona…
Niakatra fampanoavana, ny asabotsy teo ity mpanakanto ity ka izao naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora izao. Ireo olom-panjaka ambony, mpanakanto na olon-tsotra, mpanao politika, mpanao gazety no tena nitondra faisana tamin’ny alalan’ity kaonty fifosana sy fanalam-baraka olona anaty facebook ity. Tsiahivina fa nampiantsoina teny amin’ny polisy misahana ny heloka bevava Anosy ity mpanakanto voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ity raharaha ity. Tamin’ny alalan’ny fitoriana napetrak’ireo olona niharan’ny fanalam-baraka no nahafahan’ny polisy nanokatra fanadihadiana momba ity raharaha ity. Maro, araka izany, ireo olona nitondra faisana satria tena apetak’izy ireo mihitsy ny sarin’ilay olona fosaina sy alaim-baraka ao anatin’ity kaonty ity. Nitaraina vokatr’izany ireo olona lasibatra satria miafara amin’ny fanompana olona sy famotehana fiainana olona mihitsy izany. Nahaliana olona maro tokoa ity kaonty “fifosana” ity satria nahatratra analiny maro ireo mpikambana tao anatiny. Misy ireo olona manova anarana sady tsy mampiseho endrika. Vesatra isan’ny iampangana ity mpanakanto ity ny fanalam-baraka olona.
Ekena fa eo ny fivoaran’ny teknolojia, saingy tsy mety kosa ny fanalam-baraka olona sy ny fidirana amin’ny fiainan’ny olona. Efa nampitandrina rahateo ny fanjakana amin’itony fanalam-baraka olona anaty facebook itony indrindra ny fanelezana tsaho sy vaovao tsy marina. Fantatra izao fa mbola misy olona karohina izay voalaza fa mpiray tsikombakomba amin’ilay mpanakanto voarohirohy. Anatra ho an’ny rehetra ny toy izao. Rehefa tsy misy atao manaova zava-kafa fa tsy faly ny hanaratsy sy hanenjika olona fotsiny.